Fitanterana | mandimby maharo
Posted on 26 November 2012 26 November 2012 by Mandimby Maharo
Mbola ny olana eo amin’ny fitanterana eto Antananarivo Renivohitra ihany no zavanisy nanamarika iny herinandron’ny 19 novambra iny lasa iny. Ny talata 20 novambra teo dia nitokona ireo mpikambana ao amin’ny Uctu rehefa nomen’ny avy ao amin’ny Autorité des Transports Terrestres alalana hanitatra ny lalany hiditra eto andrenivohitra ireo zotra ao amin’ny Ucts. Ireto farany izay nitana ny sarandalana ho Ar300 ihany koa raha nampiakatra ny azy ho Ar400 ireo avy ao amin’ny Uctu tamin’ity volana ity. Noho io fitokonana io dia maro ireo olona no nandeha an-tongotra namonjy ny asa aman-draharaha. Ao ireo naneho fahatezerana, saingy marobe koa ireo tsy rototra. Fanatanjahan-tena vita ho azy hoy izy ireo izao fandehanana tongotra izao. ireo izay tsy afaka nanao izany dia an-ètaongotra izany kosa dia niandry ireo fiara avy amin’ny Ucts na koa nandray ifiarakaretsaka ka nifampizara fiara iray izay niray lalana. Nisy rahateo ireo olo-tsotra nana fiara lehibe no nandray mpandeha an-tsitrapo na koa nampiasany fiarany mihintsy hanaovana fitanterana iny andro iny. Nanala fahasahiranana ihany izany, ary na ireo sy mpandrindra ny fifamoivoizana aza dia tsy nanisy olana ny fisian’ireny fiara tsy manana fahazoan-dalana nefa nanao ny asa ireny.
Nahavarina ny rehetra nefa ny mbola nisin’ny fitohanan’ny fifamohivohizana ihany io andron’ny talata io. Raha noheverina manko hatrizay fa noho ny fisian’ireo fiara mpitatitra sy y fikorotan’izy ireo no niteraka izany fitohanana izany dia voaporofo fa tena efa mihoatra ny zakan’ny tananan(Antananarivo ny isan’ny fiara eto. Rehefa tsy nahita fiara mpitatitra manko ny mponina dia samy namoaka ny fiara manokany avokoa ireo izay manana saingy tsy mpampiasa izany isan’andro. Tsy ny fiara misy kodiarana 4 ihany no nameno ny Tanana io andro io fa eo ihany koa ireo fiara manana kodiarana roa to any moto sy bisikileta. Ny tarehimarika nomen’ny Instat dia toy izao ny isan’ny fiara nomena laharana ….TA* tamin’ity taona 2012 ity.
4 548 ireo fiara nomena laharana vaovao tamin’ny telovolana voalohany. Nahitana fihenana 1,8% io raha nihoatra ny teloviolana farany tamin’ny taona 2011 ( 4 607 fiara)
– ny 42,5% amin’ireo dia motocyclette avokoa. 73% amin’ireo motocyclette ireo dia vaovao.
– ny 31% kosa dia fiara madinika an-olotsotra, ka ny 15% amin’ireo no vaovao. 53% ireo efa nampiasaina ary 49% no avy any amin’ny faritany naka lajarana teto Antananarivp.
10,7% ireo camionette raha 8% ny fiara fitanterana olona ary 2% ny fiara vaventy.
Nandritry ny telovolana faharoa tamin’ity taona 2012 ity kosa dia 4 424 ireo fiara nomena laharana ….TA*. Izany hoe nihena 2,7% raha miohatra amin’ny teo aloha (4 548).
– 44,2% amin’ireo dia motocyclette. 76% amin’ireo dia vaovao.
– 18,2 no fiaran’olotsotra ka 11,7% amin’ireo dia vaovao, 48,6% kosa efa niasa ary 49,9% novana laharana avy any amin’ny faritany.
– 9,6% kosa ireo camionnette,10% no fiara fitanterana olona ary 4,6% ny fiara vaventy.
Voamarika koa, araka ity tatitra nomen’ny Instat ity fa nitana ny laharana voalohany (16,5%) amin’ireo fiara misy kodiarana efatra ny Mercedes. manaraka azy ao ny Renault sy ny Peugeot ary ny Toyota. Nisongadina kosa ny fotoùmbon’ny Huydai izay manana taha 6,8% amin’ireo fiara nomena laharana ireo. Raha ny manana kodiarana roa kosa dia ny Kinlon no mitana ny laharana voalohany (15,6%).
Ny fijerena ireo atotanisa nandritry ny telo taona farany dia nahitana fa manodidina ny 4 200 hatrany ireo fiara nahazo laharana teto amin’ny faritanin’Antananarivo. Tsy midika nefa izany fa mijanona eto Antananarivo renivohitra avokoa ireo fiara ireo, saingy ahitana kosa fa maro fiara eto Madagasikara.
Categories: Actralité, societé